'बाटो खन्ने' डाक्टरको यात्रा : धुले कक्षादेखि विशेषज्ञ चिकित्सकसम्म एचएको अध्ययन पूरा गरे पनि उनले दुई वर्ष जति घरपरिवारलाई व्यापारमा सघाए। तर, मन व्यापारमा रमाउन सकेको थिएन। त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रमै काम गर्ने निधो गरे। अनि सुरु भयो उनको नयाँ यात्रा। शनिबार, साउन २, २०७८
गाउँप्रेमी स्वास्थ्य सेवक गत वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट एक जना त्यस्ता स्वास्थ्य सेवकले अवकाश प्राप्त गरे, जो उपत्यका बाहिर दरबन्दी नभएको पदमा बढुवा भएपछि मात्रै काठमाडौं आए। उनी हुन् डा सुशीलनाथ प्याकुरेल। उनी सरकारी सेवाका अन्तिम दुई वर्ष मात्रै उपत्यकामा रहे। बुधबार, मंसिर ३, २०७७
सधैं जोखिमसँग पौठेजोरी जो रातदिन कोरोना भाइरस भएका बिरामीको उपचारमा खटिइरहेको छ, उसलाई कस्तो महसुस हुँदो हो ? वा ती सबै डरभन्दा माथि उठेका मनुवा हुन् ? कि तिनीहरुले डर भन्ने शब्द दिमागको शब्दकोषबाट डिलिट हानिसके ? बिहीबार, कात्तिक २०, २०७७
सिर्जनशील सर्जन सबैले इतिहासलाई मात्रै पछ्याउँदैनन्। अरुको सिको मात्रै गर्दैनन्। सिर्जनशील भएर त्यही कुरा नयाँ तरिकाले गर्न सकिने विकल्प खोज्छन्। नयाँ विकल्प खोज्नेमध्येमा पर्न आउँछन्, डा उत्तम लौडारी। आइतबार, माघ २६, २०७६
सरुवा रोग विरुद्धका सिपाही डेंगुको महामारी रोक्न सरकारलाई मुस्किल परेका बेला डा शेरबहादुर पुनजस्ता चिकित्सकहरू मैदानमा थिए। उनीहरुले डेंगुविरुद्ध छेडेको जेहादले नै संकट टरेको हो। शनिबार, मंसिर २१, २०७६
औषधि कम्पनीको उपहार र उपकारबाट सधैं टाढा सोमबार, मंसिर ९, २०७६
सामरिका दाहाल : जसले फरेन्सिक डेन्टिस्ट्री स्थापित गरिन् शनिबार, कात्तिक ९, २०७६
बेदाग बिन्दास शनिबार, असोज ११, २०७६
‘डे सर्जरी’ का अभियन्ता शुक्रबार, भदौ १३, २०७६
इएनटीका उज्याला दीपक मंगलबार, असार २४, २०७६
ओभरसियर बन्न आएका उप्रेतीको ३८ वर्षे स्वास्थ्य यात्रा शनिबार, जेठ ३२, २०७६
आमाको अन्तिम इच्छा पूरा गर्न क्यान्सर विशेषज्ञ बने डा बराल सोमबार, जेठ १३, २०७६
अमेरिकी मोहजालबाट फुत्केका कोलोरेक्टल सर्जन बुधबार, वैशाख २५, २०७६
हराएको मुस्कान फर्काउने डाक्टर शनिबार, वैशाख १४, २०७६
मानसिक विधाका विद्यादेव शनिबार, वैशाख ७, २०७६
जोखिम मोल्न रुचाउने मास्के आइतबार, चैत १०, २०७५
सेवामा सक्रिय प्लास्टिक सर्जन डा विशाल शनिबार, चैत ९, २०७५
कर्तव्यनिष्ठ स्वास्थ्य सेवक बुधबार, फागुन २२, २०७५
इमर्जेन्सी उपचारका अभियन्ता शनिबार, फागुन ११, २०७५
पशुपतिका भट्टका डाक्टर छोरा शनिबार, माघ १९, २०७५
बिरामीको अवस्थाले बदल्यो जसको लक्ष्य शनिबार, माघ ५, २०७५
मृत मुटु प्रत्यारोपण भनेर चिनिएको 'सर्कुलेटरी डेथ' मुटु प्रत्यारोपण गर्ने डा कुमुद शनिबार, पुस ७, २०७५
प्रधानमन्त्री ओलीको उपचारमा संलग्न डाक्टर सन्तको सपना शुक्रबार, पुस ६, २०७५
गरिब बिरामीलाई निःशुल्क उपचार र औषधि दिएर रमाउने डाक्टर बिहीबार, मंसिर ६, २०७५
दह्रो मुटु भएका डाक्टर वैद्य शनिबार, मंसिर १, २०७५
नेपाली मुटु जोगाउन मरिमेटेका डा मृगेन्द्र शनिबार, असोज १३, २०७५
नेपालमा एनअाइसियुको जग बसाउने डाक्टर शनिबार, असोज ६, २०७५